मिति २०७४ फागुन ५ गते
ने.क.पा. (एमाले)का अध्यक्ष के.पी. ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई हाम्रो पार्टीले बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छ । यो सरकारमा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)लाई सहभागी बनाई लैजान हामीले जोड दिन्छौं ।
गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनमा ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)को बीचमा वामपक्षीय गठबन्धन र ने.का., मधेशवादी र राजावादीहरुका बीचमा प्रतिक्रियावादी र विखण्डनकारीको गठबन्धन बनेको थियो । हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र वामपक्षीय गठबन्धनका बीचमा बाग्लुङ र प्यूठान जिल्लामा चुनावी तालमेल भएको थियो । अर्घाखा“ची, गुल्मी र डडेलधुरामा ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को अनुरोधमा वामपक्षीय गठबन्धनलाई विजयी बनाउन हामीले समर्थन गरेका थियौं ।
त्यो चुनावमा हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्म निरपेक्षताको रक्षा र देशको समृद्धिको लागि जोड दिएको थियो । उक्त चुनावमा ने.का सहितको गठबन्धनको विजय भएको भए गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षताको लागि गम्भीर खतरा हुन्थ्यो । त्यसकारण, ने.क.पा. (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनले विजय हासिल गर्नु सही भएको छ ।
गत के.पी. ओलीको नेतृत्वको सरकार मुख्यतः के.पी. ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्ध, राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडान तथा चीनस“ग गरिएका सम्झौताहरु उल्लेख्य सकारात्मक काम भएका थिए । अहिले उनको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, चीनस“ग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि जोड दिने छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । साथै देशमा संस्थागत हु“दै र भयावह बन्दै गएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न र जनजीविकालाई सुलभ बनाउन यो सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने पनि हामीले चाहन्छौं ।